Onye isi ala Seçer na-enye Ozi Ọma Maka Mersin Metro | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinPresident Seçer Na-enye Ozi Ọma maka Mersin Metro
02 / 07 / 2019 33 Mersin, Mediterranean Region, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Onye isi oche nzuzo nyere ozi ọma maka ụzọ ụgbọ oloko
Mersin Metropolitan Municipality Mayor Vahap Seçer nyere ozi ọma maka ụgbọ ala Mersin. Diyarbakırlılar Onye isi oche nke Mersin Alaka Alakụba Ferudun Gündüz na ndị isi nke ntụziaka Seçer nabatara, Mersin ka ọ bụrụ ọrụ obodo a ga-ahụ maka ya, atụmatụ atụmatụ ego na ọrụ ha ga-eme n'ọdịnihu. N'ịkọwa na ha abịawo na ngwọta maka nsogbu niile nke mkpa Mersin, Seçer kwuru, sị, "Anyị ga-ewebata ndị Mersin ka ha rụọ nnukwu ọrụ na mkpebi na ọrụ anyị na-arụ n'ọhịa dị iche iche. Otu n'ime ha bụ metro. Anyị malitere ọmụmụ banyere isiokwu a. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, anyị chọrọ ime nke a na nkeji iri na ise nke 2020. "
Ik Anyị weere nzọụkwụ nke nkwado siri ike "
Na-ekwupụta na ha emezuwo ọrụ ọ bụla ha kwere nkwa kemgbe ụbọchị ha bịara n'ọfịs, Seçer kwuru na ha ewerewo ụzọ mbụ nke ọrụ siri ike maka ịzụ ahịa nke bụ otu n'ime nsogbu ndị kacha mkpa na Mersin Port. Seçer kwuru, sị, "Anyị mere mgbanwe ngwa ngwa banyere mgbanaka usoro nsogbu okporo ụzọ nke ọnụ ụzọ ámá. Anyị ejiriwo MIP na State Railways mee ihe ndị dị mkpa iji hụ na njikọ nke ụzọ okporo ụzọ dị na ọdụ ụgbọ mmiri ahụ kpọmkwem. "
"Anyị ga-eji nkwuwa okwu malite itinye ego niile Mersin chọrọ"
Your selections President, ọnọdụ na Turkey aku na uba bụ ha mgbochi ụfọdụ oru ngo, ma ngwa ngwa pụta ìhè ihe ha na-achọ ụzọ gafere na ya, "mgbe ahụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị echiche na na afọ ise anyị ga-n'atụghị egwu banye investments na mkpa Mersin anya a si oke nke otú m nwetara nsogbu. Anyị kpebisiri ike. Anyị achọghị ikpofu paụnd. Weil jiri ya mee ihe n'ụzọ amamihe. Anyị bụ obodo bara ọgaranya. Ihe dị mkpa bụ inwe ike iji ha mee ihe n'ụzọ dị irè, nke dị irè ma dị mma ma anyị ga-eme ya. "
Mayor nke Mersin kwupụtara na ndị Mersin nyere ha ozi dị mkpa mgbe ha gara nhoputa ndi ochichi. N'oge a, ndi ntuli aka gara nhoputa ndi ochichi ka ha choo ezigbo onyeisi obodo, ma n'aka nke ozo ka o choro ka ndi mmadu nwekwuo onwe ha, ndi ochichi ndi ochichi na ndi ozo nke meghere ohuru ohuru anyi. ma họrọ anyị. Aghaghị m ịrụ ọrụ a nke ọma. Achọrọ m iche echiche dị ukwuu karị, ihe ndị ọzọ gụnyere.
Maz Ịgbaba n'azụ ngọpụ adịghị adabara m "
Seçer kwuru na ha emeghi mkpesa banyere ọnọdụ nke obodo dị ugbu a ha weghaara, na ha anaraghị ihe ọ bụla, bah Anyị apụghị ịkatọ, anyị rịọrọ ụmụ amaala anyị ka ha jiri aka ha dozie nsogbu anyị ma weghaara obodo anyị ugbu a. Ịgbaba n'azụ ngọpụ ka anyị weghaara mpempe akwụkwọ adịghị eru ndị mmadụ na-agbalị maka ihe ịga nke ọma, ọ naghị adịrị m mma ma ọlị. Anyị ga-enwe ezigbo ihe ịga nke ọma. Ihe dị mkpa bụ iji nlekọta obodo. Echiche obodo m na-emetụta ụwa. Ihe m chere, otú m chere obodo ahụ si dị. Ọ bụrụ na ị bụ onyeisi obodo na-eji nkà na ọdịbendị akpọrọ ihe, mkpebi ikpe obodo dị ka nkà, omenala na egwuregwu na-arị elu ".
Ferudun Gündüz, ız Anyị na gị nọ n'ihe niile "
Ferudun Gündüz, bụ onyeisi nke Alaka Mersin nke Diyarbakır, kwupụtara ọchịchọ ya na President Seçer maka nlekọta nke òtù ahụ ma kwupụta na ha nwere ike ịkwado ọrụ ọ bụla, omenala na akụ na ụba iji mepụta maka obodo ahụ. Gündüz kwuru, ız Anyị nọnyeere gị n'ihe ọ bụla ma anyị abịa inye ozi nkwado. Anyị chọrọ itinye aka na mmepe nke akụ na ụba obodo, ndụ omenala na usoro ndị ọzọ. Anyị na-achọ imekọ ihe ọnụ na-arụ ọrụ na mmekọrịta akụ na ụba. Anyị na-ahụ onyeisi obodo ukwu dịka onye ndú obodo ahụ. Anyị na-eche na onye ndú nke ga-eme ka onyinye kacha mkpa na mmepe obodo ahụ bụ onyeisi obodo na usoro mmefu ego, ndị ọrụ na ọhụụ. Anyị chọrọ ka anyị na-akpakọrịta na Metropolitan Municipality ". Mgbe nleta, Gündüz nyere President Seçer onyinye.
President Aktaş Na-ekwusa Ozi Ọma Ahụ! Ebe ọ bụla ga-ezute Metro
Onye Minista Gave Ozi Ọma, Nnukwu Transportgbọ njem na Bosphorus `
Mayor Seçer: 'Ezigbo Ọrụ na Mersin Metro Mgbe nke ahụ gasịrị'
President Seçer na-eweta Ọgwụgwụ na Ụzọ Ndị Mmụta
Mayor Aydın na-azaghachi na High Speed ​​Train Route Claims!
Onye isi Uysal na-amalite nke İTAKSİ
Port nke Mersin
Mersin metro oru ngo
RayHaber Ozi Ntanye 02.07.2019